Weerar gaadmo ah oo lagu dhaawacey taliyaha ciidamada Booliiska Gobolka Bay G/Sare Mahad – idalenews.com
Taliyaha Ciidanka Booliiska ee Gobolka Bay G/Sare Mahad Cumar C/kariim ayaa dhaawac ka soo gaarey weerar gaadmo ah oo lagula beegsadey inta dhaxeysa tuulooyinka Yaaqbari weyne iyo Leego. Waxaana weerarkaas ku dhintey darawalka Col Mahad.
G/sare Mahad Cumar oo safar dhulka ah uga soo kicitimey degmada Baydhabo kuna wajahnaa magaalada Muqdisho ayaa waxaa jidka u galey xoogag Al-Shabaab oo iyagu sheegtey masuuliyada weerarka gaadmada ahaa ee la doonayey in lagu qaarajiyo taliyada Qeybta Booliiska Gobolka Bay.
Wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Gobolka Bay ayaa ah mid amaankeeda aanu fiicney oo aan la isku haleyn karin, iyadoo dhowr jeer oo hore dagaalo gaadmo ah loogu geystey masuuliyiinta sare ee gobolada Shabellaha Hoose iyo Gobolka Bay. iyadoo sidoo kale dhowr jeer dhac loogu geystey dadka ku safra wadadaas.
Dhaawaca G/Sare Mahad Cumar ayaa dhaawaciisa la sheegey inuu yahay mid fudud waxaana loo qaatey magaalada Muqdisho.